China Frike Classical Brew Beer Mug iko ụlọ ọrụ na ndị na-emepụta | Chuancheng
Mason Jar Agbamakwụkwọ Na-ahụ Maka Apothecary Jars Honey Pot B ...
Ntughari Mkpo Ejiri Mpempe akwụkwọ gbasara Mmanụ a Honeyụ na Tin Lid
Ite a na-ere ebe a na-etinye ebe a na-edebe ihe nchekwa nri ...
Ochie ọdịnala Brew Beer Mug iko
Iri ite nke ite mmiri Mpekere Mpekere karama na wunye spout na ...
Mmanụ oliv na mmanya mmanya
Crystal Candy Jar with Liid, Kwụsị Nri Ebe nchekwa nri ...
Ejiri akwa a nke Beer Mugs mee iko siri ike na nke dị mma.
N'ala ahụ dị obere, nnukwu ọrụ dị n'okpuru na ejiri aka na - eguzogide mmiri ka ọ dị obere. I zuru ike n'ihu telivishọn ma ọ bụ n'oriri nke gị na ndị enyi nwere otu n'ime ụmụ irighiri ihe ndị a dị n'aka gị.
Omuma ahihia agwa ndi German nke ochie na-eme ka amịlị na -ekwu ihe ụtọ.
Zuru oke na edozi dị ala iji guzogide ngbanye na nfucha, na-egosipụta njirimara kpochapụwo nke dị mfe ijigide ma sie ike zuru ezu maka ịmị mkpụrụ na friza - igwe ndị a ga-eme ka ihe ọverageụ coldụ gị dị ọcha ruo swig ikpeazụ.
Nnukwu anụ ọhịa Beer Glass - a na - agbagọ agbagọ ọgbara ọhụrụ na ụdị German ga - agbakwunye ọkaibe na ụdị nri abalị na ahụmịhe mmanya gị; kwesịrị ekwesị maka kọfị, tii, na ihe ọ otherụ otherụ ndị ọzọ.
Njirimara - iko dị ukwuu nke nnukwu ite ahụ na - eme ka ọ dị mma ijigide mug ma nwee ọ enjoyụ ihe ọ drinksụ drinksụ ruo ogologo oge; ike ya 17,25-ounce na-enye gị ohere ịnụ ụtọ biya kachasị amasị gị n'otu oge; oke dị ala na-agbakwụnye nkwụsi ike na obi dị ụtọ na stein.
Gilasi nke Italia nke oma - ejiri aka gi mee ya n'bytali site na ndi nwere iko mmiri arara onwe ha nye onwe ha na imeputa iko di elu, nke na adighi agha. ndị a na-adọwa mmiri nwere oghere dị mma na mkpanaka ndị nwere iko dị egwu.
Iji Omuma ma Obu Na Omuma - Stein biya anyi zuru oke maka iji eme ya n’oge niile; ma ọ bụ n'ụlọ oriri nkịtị ikiri egwuregwu bọọlụ Sọnde ma ọ bụ maka mmemme oriri na ọ fanụciụ oriri na nkwari, mmachi ndị a na-adị nke ọma na mmemme ọ bụla.
Ntuziaka Nlekọta - Igo anyị dị arọ dị mfe ịsa aka na efere ịsa ahụ maka enweghị nhịahụ, nchacha na-enweghị mmerụ, ịsa, na usoro akọrọ.
Nke gara aga: Nnukwu Glass Sports Beer Mugs
Osote: Iko Beer
Kalama Beer nke oge a
Swing Top Beer kalama
Glass Pụrụ Iche Bekee
Jumbo Thick Glass Sports Beer Mugs
Nnukwu Glass Sports Beer Mugs